Nanị deliberating, a atụmatụ egwuregwu bụ ọ bụla egwuregwu ebe upshot kpebisiri ike site uzo ozo a osompi-eme. Egwuregwu ndị a na na-meriworo site azum kama ike ma ọ bụ nka na ụzụ nkà. Strategy egwuregwu na-ewu ewu na-ekwu iche video egwuregwu nakwa, gbara ọtụtụ ụdị nke egwuregwu.
Atụmatụ egwuregwu bụ a Ukwu mode itinye aka Player na echiche kenjo egwuregwu nkà. Egwuregwu ndị a na na-ugboro ugboro inwe mmekọrịta ya mere ha na-enye onye pụtara ìhè ụdị nke na-elekọta njikọ aka-ejikọ ọrụ, na atụmatụ egwuregwu na-obi ike na-Player ọrụ n'aka na igbochi ahuokika. Egwuregwu ndị a na meworo oké azụmahịa na ahịa na magburu onwe Google Play ogo. Ya mere, ebe anyị bụ ndị na 50 kasị mma Android Strategy Games-eme ka ị ọzọ ọchịchọ ịmata ihe ndị adventurous ụwa.
1. Age nke Mmepeanya
< Download Link
Age nke Mmepeanya bụ ihe kasị mma android atụmatụ egwuregwu. Ọ na-adọkpụrụkwa si nsọtụ nile na tinye na ọdịnaya dị ka offline play, Google Play Games ọrụ na a ụyọkọ ọnọdụ agụta agha ụwa abụọ. The Usoro ya arụ ọrụ na bụ gị nke iwu tupu ebute nke ọ bụla gburugburu na mgbe ahụ ndị ọnwụnwa na-emezu.
Anomaly 2, a kasị mma Android atụmatụ egwuregwu bụ ụlọ elu iwe na ụlọ elu agbachitere egwuregwu na comprises ike egwuregwu play na ịrụ ezi ndịna. E nwere ihe na-akara multi-ọkpụkpọ usoro ebe a na-arụ ụlọ elu iwe na ndị ọzọ na ọkpụkpọ na arụ orụ di elu agbachitere nke bụ ihe ahụkebe egwuregwu play agwa ị gaghị kụrụ n'elu na ọtụtụ ebe ndị ọzọ.
3. mgbụsị akwụkwọ Dynasty-RTS
The mbụ ihe ị ga-edebe banyere mgbụsị akwụkwọ Dynasty bụ ya pụrụ iche ndịna. Niile nke ndịna-emeputa na-agwụ agwụ ke ido nke omenala Chinese sere nke na-ewepụta na a bit nke a ezi obi na-adị ka egwuregwu play. Ị "agba" gị iwu site n'ụzọ anụ ahụ circling iche iche na zaa na-agwa ha ihe ha na-eme. Ọ bụ ezigbo atụmatụ na atụmatụ bụ na ị ga-ewere mma agha na igbochi ọha agha.
4. Battlestation-mbụ Kpọtụrụ
Nke a bụ Mkpa ọkụ, ma na-eri ahụ atụmatụ egwuregwu na nke ị jikwaa a ọgụ ojii. Tinye n'ọrụ dị iche iche, upgrades, ogbunigwe, na ndị ọzọ equipments nke demolition, ị ga-unu nche ọgụ ojii si ọbịa mwakpo. Bụ isi larịị nke egwuregwu bụ n'efu na-egwu ma ị ga-azụ ndị fọdụrụ nke egwuregwu.
5. ọganihu Beach
Ọganihu Beach bụ a free kasị mma android atụmatụ egwuregwu. Na egwuregwu a, ị ga-ebupụ ya ụgbọ mmiri na ndị agha na imeri ndị osimiri gị iro. E nwere ihe ime mode ebe ị ga-merie blackguard ma tọhapụ agwaetiti ụmụ amaala ha ọbubu-eze nke egwu. Ị nwere ike kwalite gị onwe gị isi tinyere gị agha na-enye onwe gị mma ohere na nchebe na agha.
6. Nsogbu nke Clans
Na egwuregwu a ị ga-etinye ihe nchebe iji chebe ọgụ site ndị ọzọ Player na mgbe ahụ ọgụ ndị ọzọ egwuregwu. Ọ bụ kpamkpam a na-elekọta mmadụ egwuregwu dị ka ọrụ mode adaghị backdrop fọrọ nke nta mgbe ị na-amalite na-akpọ. Ọ na-e cloned a ọtụtụ ugboro ma ka na mụ ndị kasị ewu ewu free atụmatụ android egwuregwu.
Eufloria HD bụ a iche iche ụdị atụmatụ egwuregwu. Kama N'ịgbakwasị on ókè agha n'etiti abụọ ozu, utu aha a na-elekwasị anya na-emeri asteroids na ohere na mgbe ahụ tinye n'ọrụ ego ha.
8. Oyi kpọnwụrụ Synapse
Oyi kpọnwụrụ Synapse a pụtara oké stratejik agha egwuregwu ebe ị kwesịrị ị na ikpochapụ etoju site n'ime atụmatụ gị agha ma na-egbu ndị ọjọọ ụmụ okorobịa. E nwere ngosi nke ngwá agha i nwere ike iji na otutu nke egwuregwu ihe na iro ma doo anya na ịke azum.
9. Great obere agha egwuregwu 1
The Great Little Agha Game usoro e enwe mmasị n'ebe na ukwuu gosiri. Na egwuregwu a ị na-akpali agha tinyere a osisi na mgbe ị na-esi n'ime nso, ị nwere ike ọkụ na ha.
10. Alaeze Rush
Nke a bụ egwuregwu mara maka ya ngwangwa, na-eri ahụ egwuregwu play ma fun nhọrọ na agha na ụlọ elu.
11. Alaeze Rush n'ókèala
Nke a bụ egwuregwu si usoro nke Alaeze Rush. Ọ na-egwuri otú ahụ dị ka Alaeze Rush na-egwuri.
Si n'ebe bụ ngwakọ nke a lanarị egwuregwu na a SIM egwuregwu. Ị na-egwu dị ka ihe astroloji onye rouses si cryonics ebe ukwuu na ịdị ukwuu nke ohere. Ị ga-atachi obi, na-gị oxygen osisi ike elu, na ikwu ụzọ gị ụgbọ mmiri mgbe emeso ndị ọbịa na-adịghị ekwu okwu dị ka ị na-ekwu ma ị ga-emesị mụta ikwu okwu dị ka ha na-eme.
Plague Inc bụ kemgwucha fun na-enwe mmasị n'ebe egwuregwu na edozi na-a 4.5 fim na Google play ụlọ ahịa.
14. Osisi vs Zombies 2
Nke a bụ egwuregwu debatably kasị ukporo atụmatụ egwuregwu. Nke a bụ ụlọ elu agbachitere ịke egwuregwu na nke ị ga-ike ngwá agha osisi ka unu nche yad si zombie hoard. Site na iji a ngwakọta nke osisi, ị nwere ike nweta ihe ịga nke ọma ọ bụla larịị. Ọ bụ free na na ngwa ịzụrụ.
Okwu ahụ bụ "Great ndịna-emeputa adịghị abụchaghị oké egwuregwu" na-akọ a egwuregwu dị ka Rymdkapsel. N'agbanyeghị nke dị mfe ndịna-emeputa, egwuregwu a bụ hell fun.
16. skulls nke Shogun
Nke a bụ egwuregwu a n'aka dabeere atụmatụ egwuregwu na a ngwangwa ijeụkwụ, mkpali na cartoonish ndịna. Ọ na e dere 24 etoju, 4 chi, 6 ọchịagha, 4 kpokọtara anụmanụ mọnk na ụdị nile nke ndị ọzọ na ọdịnaya na-enwe.
17. Star Wụk
Na egwuregwu a ị na-ewu gị onwe gị ụgbọ mmiri, igbochi ndị ọbịa si emeri gị ụgbọ mmiri, na-achọpụta na eluigwe na ala na ịfụ a otutu stof. Ndịna-emeputa bụ ochie akwụkwọ nke na-enye a maa mma ochie na-enwe egwuregwu.
18. XCOM Iro Unknown
XCOM: Iro N'ime bụ ihe Android atụmatụ egwuregwu. Ọ na-egosiputa ndịna-emeputa na dị nnọọ ukwuu karịa nkezi maka mobile nakwa dị ka a ogologo otu ọkpụkpọ mkpọsa nke nwere ị na-alụ ọgụ anya ọbịa mbuso agha iji cheesi ịke atụmatụ na-arụzi ụgbọala. A na-eju Strategy egwuregwu bụ kpam kpam free.
19. Age nke Sparta
20. Age nke ebu agha Alaeze Ukwu
Na ndị a anyị nwere ọzọ atụmatụ egwuregwu na nke ahụ bụ na-egosi nke ike na Ime Anwansi na Age nke Alaeze Ukwu na Heroes. Na Age nke ebu agha Alaeze Ukwu ị ga-iwu na gị onwe gị dị ebube n'ókèala mgbe ọrụ dike, ime agha na ịgagharị teknụzụ iji merie ndị iro ya niile.
21. Agha Otuto
Nke a atụmatụ egwuregwu bụ ihe ndị ọzọ yiri Nsogbu nke Clans ma ọ na-egosiputa oge a owuwu na agha, na-agụta grenadiers, tankị riflemen na n'Ịlụ Agha ụgbọ elu.
22. Hills Otuto 3D
Hill Otuto 3D egwuregwu e setịpụrụ n'oge Agha Ụwa nke Abụọ. Egwuregwu a na-ewepụta gị na-elekọta ịgbachitere putara ighe enịm bunkers si mgbe nile ebili mmiri nke ndị iro. Ị nwere ike iji dị iche iche na ngwá agha, si rifles, mortars na flamethrowers, ikuku etiwapụ.
23. Star Wars: Ọchịagha
Engross onwe gị n'ime Star Wars cosmos na Disney kpakpando agha: Ọchịagha, nke na-enye ohere ị na-egwu ma dị ka nnupụisi ahụ, ma ọ bụ dị ka n'ógbè. Ị kwesịrị ị na-eji amamihe rụọ na ike gị isi, nchịkwa agha, agba ha ume, ma na-njikere ọgụ iro ókèala. The nka na-etolite mkpakọrịta na egwuregwu si gburugburu ụwa na-etinye na ọbụna ihe ọzọ na-akpali akpali a agha atụmatụ egwuregwu.
24. Stormfall: Welienụ nke Blaur
Nke a free atụmatụ egwuregwu awade a "n'ụzọ zuru ezu na-apụta" Ozi na Mmadu atụmatụ ahụmahụ. Ndabere nke egwuregwu bụ setịpụrụ na a n'ala oge ochie anwansi. Egwuregwu na-ahapụ gị jiri ụsụụ ndị agha nke paladins, Ọzọ, dragons, na brawl ịga nke ọma n'ókèala na-ehichapụkwa anya mmiri gị iro.
25. X-Agha: Nsogbu nke Zombies
Nke a free atụmatụ egwuregwu yiri Nsogbu nke Clans. Ọ bụrụ na ị Fans nke Nsogbu nke Clans mgbe ahụ anyị na-ewetara gị ọzọ-akpali akpali egwuregwu Nsogbu nke Zombies na e nwere Zombies, lasers, robots na oge a na Superman.
26 enweta nkwanye ikpe
Nke a free atụmatụ egwuregwu bụ ihe niile banyere agha na nke ị ga-anọchibido gị iro. Ị ga-mụbaa ókèala nke alaeze gị. Ọzọkwa, egwuregwu a bụ ihe niile banyere àgwà gị.
27. Castle Nsogbu
Nke a bụ otu n'ime ihe ndị kasị eri ahụ free azum egwuregwu mgbe na nke ị na-enwe idebe gị ka ị bases ma wuo gị onwe gị alaeze ukwu.
28. Ocheeze Rush
Ocheeze Rush bụ ihe niile banyere ewu n'ocheeze na iwepụtakwu ókèala gị. Nke a free atụmatụ egwuregwu na-agụnye zoro ezo ahụmahụ. Ya mere dị adịghị gị n'iyi oge na ngwa ngwa nwere egwuregwu a na mkpanaka gị na ekwentị mkpanaaka na nanị site nbudata ya na download njikọ.
29. mbụ Ebu
Ahịa: $ 1
Nke a bụ uche Nkọ na ngwa ngwa paced free atụmatụ egwuregwu. Nke a atụmatụ egwuregwu bụ otu nke kasị mma releases nke afọ. Ọ bụ ihe niile banyere nuclear agha.
30. Nsogbu nke nwenụ 2
Nke a free atụmatụ egwuregwu bụ n'ezie na oge iwu nke anyị dike si ọgụ nkà. Ọ bụ ihe niile banyere mercenary Mania. Ị nwere ike igwu n'ụzọ nke gị.
31. World na ogwe aka
Nke a bụ free agha ịme anwansị atụmatụ egwuregwu na magburu onwe ndịna-emeputa na egwu animations. Egwuregwu a bụ ihe niile banyere obon onwunwe na ọbọ ọtụtụ ihe aga-eme iji irite ego ihe. Ị bụ naanị otu nzọụkwụ n'ebe a free egwuregwu na-akpali.
32. Alaeze Ukwu: Rome-esiwanye
Ọ bụ otu n'ime ndị kasị mma free azum egwuregwu. Alaeze Ukwu: Rome-esiwanye bụ ihe niile banyere-azụ ndị agha na imeri iro gị. Na egwuregwu a na ị nwere na-arụ ọrụ dị ka otu ìgwè na iji merie ndị iro gị.
33. anyaukwu maka otuto: Agha Strategy
Nke a atụmatụ egwuregwu bụ free na-egwu. Nanị i nwere ime bụ na sonyere a alaeze gị buddies na-aga a agha. Ị nwere iji gosi gị n'ókèala ebube site ịkpata elu ihe.
34. Dọrọ Racing
Car racing Fans, ebe anyị na-ewetara gị kasị akpali akpali free atụmatụ egwuregwu nke afọ jupụtara ahụmahụ na racing nke ga-ụgbọala ị crazy.
35. Top iri na otu Ịbụ a Soccer Manager
Nke a free atụmatụ egwuregwu na-enye gị na ezigbo football egwuregwu. A magburu onwe egwuregwu bụ kpam kpam free. Top iri na otu Ịbụ a Soccer Manager bụ ihe niile banyere ewu gị onwe gị football alaeze. Ihe karịrị 100 nde Player na-anụ ụtọ egwuregwu a.
36. Galaxy Akụkọ Mgbe Ochie
Nke a free egwuregwu bụ ohere ọgụ atụmatụ egwuregwu. Na egwuregwu a na ị nwere mpi na ọtụtụ egwuregwu na a ike agha n'ọhịa. Ya mere inwe njikere maka egosi gị ikike idi.
Nke a bụ a vibrant Atụmatụ Agha egwuregwu na nke ị ga-agha megide gị iro na ị ga-ewere search maka ego ha na-agha na onye iro isi ahụhụ.
38. Tekken Kaadị ndorondoro
Ihe karịrị nde 11 ọrụ na-anụ ụtọ nke a free egwu egwuregwu. Egwuregwu a na-agụnye n'ụwa nile asọmpi na ahụkebe visual ndịna-emeputa na ahụmahụ n'isi gafee ụzọ nke ọkpụkpọ.
39. bun Agha
Bun Agha bụ ahụkebe 3D ndịna-emeputa atụmatụ egwuregwu na ezi na-aga aga na na kwa free nke na-eri. Ọ nwere ebube music ụda. Egwuregwu a nwere 25 jụụ nnukwu anụ maka na-enyefe ihe obi ụtọ maka ọkpụkpọ. Ị nwere mezue na ọkwa-irite ego ihe.
40. Alexander- Strategy egwuregwu
Nke a atụmatụ egwuregwu dị mfe na free na-egwu. Ihe karịrị 600,000 ọrụ na-aha ka egwuregwu a. I nwekwara ike ịbụ kechioma otu grabbing egwuregwu a si download njikọ.
41. Total imeri
Ke akpatre, a ezi agha atụmatụ egwuregwu na-abịa gam akporo. Total imeri bụ ihe niile banyere ewu a dike Roman obodo na nke ị nwere jikwaa nile site na gị onwe gị. Ọ bụ a zuru ezu adventurous egwuregwu free nke na-eri.
42. Nsogbu nke òtù ndị omempụ
Egwuregwu a bụ ihe niile banyere akpọchi 20+ bosses na crafting gị onwe gị òtù. Ị nwere Ọkwa gị ụzọ ka underworld òtù. Ọ bụ ihe niile banyere emebiwo brats. Ọfọn ị ga-kpam kpam-ada na ịhụnanya na a free nke na-eri egwuregwu.
43 Air Patriots
Nke a bụ agha atụmatụ egwuregwu na nnọọ mfe njikwa. Nke a bụ egwuregwu banyere ụgbọelu na banyere ịkpata elu scores na iji mee ka ụgbọ elu ọzọ-ebibi ihe.
44. dainosoo Agha
Na nke a na-akpali akpali usoro egwuregwu ị na-ewu mines na ala ahịhịa juru. Ị nwere iji merie agha iji nwere ike. Ị dị nnọọ mkpa na-emezu kwa ụbọchị ihe mgbaru ọsọ na-ụgwọ ọrụ.
45. Swiiti anwụrụ Saga
Nke a atụmatụ egwuregwu bụ ndị kasị mma egwuregwu anyị nwere na anyị na ndepụta. Ya ndịna-emeputa ga-ahapụ ọkpụkpọ agụụ na-agụ na ọchịchọ nke na-ọzọ. The gburugburu ebe obibi nke egwuregwu a bụ nnọọ atọ ụtọ. Mere, dị nnọọ ịbanye n'ime n'ala candies for free site na nbudata na nyere njikọ nke a egwuregwu.
Naanị bịa ma wuo gị ezigbo obodo na enweghi ngwụcha ọnụ ọgụgụ nke ụlọ. Nke a atụmatụ egwuregwu na-enye gị elu àgwà 3D ndịna-emeputa nke na-eme egwuregwu a kasị ezi uche egwuregwu gị cell igwe.
Ahịa: $ 9
Nke a atụmatụ egwuregwu bụ ihe kasị na-adịbeghị anya ntọhapụ nke 2015. Ọ emewo meriri ọtụtụ awards nke na-eme ya kasị mma n'ire egwuregwu nke afọ. Ya price bụ $ 9. Ya mere football Fans ihe ị na-eche? Dị nnọọ ịbanye n'ime ata ụwa nke football na-abịa gafee gị football ebre nkà.
48. Iwe nnụnụ
Iwe nnụnụ bụ ihe niile banyere ebibi ndị anyaukwu na pigs site pụrụ iche ike nke Iwe nnụnụ. Ntachi obi nke Iwe nnụnụ bụ n'ihe ize ndụ. Ị naanị ka efere si na reprisal on pigs n'ihi na ha zuru àkwá nke Iwe nnụnụ.
49. Star Ahịa 4X Alaeze Ukwu J.Randall
Ahịa: $ 5.8
Na nke a atụmatụ egwuregwu ị na-echebe gị ebe si ọbịa ọgụ. Unu na-eme ike gị na ndọrọ ndọrọ ọchịchị na aku na uba na-akpa nkata.
50. dragọn Village 2
Nke a atụmatụ egwuregwu nwere ekere òkè akụkọ nke e nwere na ise evolushọn nkebi. Ị ga-alụ ọgụ megide enyi gị dragon. A niile bụ ihe nweta elu scores.
> Resource> emulator> 50 Best Android Strategy Games